Budata MusicBee maka Windows
Free Budata maka Windows (11.41 MB)
MusicBee, nke pụtara netiti ọtụtụ ihe ọkpụkpọ egwu ọzọ nwere atụmatụ ya siri ike yana ọdịdị pere mpe, nwere ike ime ka ị gbanwee onye ọkpụkpọ ochie gị.
Ị nwere ike ịmekọrịta listi ọkpụkpọ gị na ngwaọrụ mkpanaka niile gụnyere gam akporo, iPod na ngwaọrụ MTP. MusicBee nwere interface yiri iTunes ma na-enye nkwado mmekọrịta na njikwa maka iPod na iPhone. Na nke a, ọ na-agbalị na-ezu ohi obi nke iTunes ọrụ. Noge usoro mmekọrịta, MusicBee nwere ike ịrụ nhazi ụda ma ọ bụ ntụgharị usoro dịka ngwaọrụ siri dị.
Njikwa ọba akwụkwọ egwu na edezi
Ọbá akwụkwọ egwu mmemme ahụ na-achịkọta egwu, faịlụ ọdịyo, mgbasa ozi na ụlọ ọrụ redio ị na-eso. Ị nwere ike iji ohere nke nzacha dị elu mgbe ị na-ahazi ọba akwụkwọ egwu gị. Ị nwere ike ịnyefe faịlụ egwu na kọmputa na-akpaghị aka na mmemme ma melite ozi faịlụ na kọmputa dịka nhazi nke ị na-eme nọbá akwụkwọ.
MusicBee na-enye ngwa ndezi zuru oke iji melite mkpado egwu egwu dị na listi ọkpụkpọ gị wee mezue ozi efu. Na ngwá ọrụ a, ozi dị ka efu album oyiyi, song ụdị, onye ọbụ abụ aha, oge, lyrics nwere ike na-akpaghị aka hụrụ na ịntanetị. Mgbe a na-emepụta mkpado ndị a, ị nwere ike imelite site na ozi achọtara na Last.fm. Usoro mkpado a zuru oke na-arụ ọrụ dị mkpa nime ka ọba akwụkwọ egwu gị enweghị ntụpọ. Ụdị na-akwado na mkpado MusicBee: ID3 na APEv2 (maka faịlụ MP3), Vorbis (maka faịlụ Ogg na FLAC), MPEG (maka faịlụ M4A), WMA, na APEv2 (maka ndị ọzọ)
MusicBee, nke na-enye ihe ntụgharị usoro agbakwunyere, ịnyefe egwu site na CD, ụda normalizer, onye na-edezi mkpado, yana ngwa edezi akpaka maka ebe nchekwa gị, na-aga nihu na-agbakwunye ndị ọhụrụ na ngwaọrụ ndị a na mwepụta ọhụrụ ọ bụla.
Chọpụta egwu ọhụrụ
Site na ngwa Auto-DJ dị na MusicBee, ọ nwere ike inyere gị aka ịchọpụta egwu ọhụrụ sitere na ịntanetị wee wepụta egwu echefuru echefu na ebe nchekwa gị.
Nkwado ngwa mgbakwunye na isiokwu
Ị nwere ike hazie ọkpụkpọ egwu gị ka ọ jiri agba dabara gị ụtọ yana mgbakwunye ga-adabara mkpa gị.
Nha faịlụ: 11.41 MB
Mmepụta: Steven Mayall